Qalabka caaga ah
Qalab qasab ah
Kuwa Irbadda Qaata
Qalab gaar ah
Farqiga u dhexeeya maqaska maqaarka iyo Suturing Scissors
Waqtiga boostada: 03-23-2021
Farqiga u dhexeeya maqaska nudaha iyo maqasyada Suturing Farqiga u dhexeeya maqaska unugyada iyo maqasyada tolida sida soo socota: 1. Maqasyada unugyada waxaa loo isticmaalaa in lagu jaro unugyada aadanaha, iyo maqasyada tolida ...Akhri wax dheeraad ah »
Ka waran Qalabka Qalabaynta?
Waqtiga dhejinta: 03-19-2021
Ka waran Qalabka Qalabaynta? Qalabka Microsurgical-ka waxaa loola jeedaa aaladaha khaaska ah ee khaaska ah ee ku habboon dhakhaatiirta si ay u sameeyaan kala-goyn faahfaahsan, kala-soocid, iyo baabi'inta iyo hagaajinta unugyada ku hoos jira mikroskop. Qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo qalliinka microsurgery waxaa ka mid ah:Akhri wax dheeraad ah »
HAYNTA DHAQANKA DHAQAALAHA
Waqtiga boostada: 03-16-2021
HAYNTA DHAQANKA DHAQAALAHA. Dhammaan qalabka indhaha waxay u baahan yihiin si taxaddar leh u maareeya. Meelaha Scissor waa kuwo aad u jilicsan; Tilmaamaha waa inaan la taaban Dhamaan maqasyada, cirbadaha haysta iyo xoogaa xoog leh waxay u baahan yihiin in talooyinkooda la ilaaliyo ilaaliyayaashu waa inay daboolaan dhamaan daabka ama ...Akhri wax dheeraad ah »
Toban isbeddel oo waaweyn ee warshadaha caafimaadka Shiinaha ee 2021!
Waqtiga boostada: 03-13-2021
Toban isbeddel oo waaweyn ee warshadaha caafimaadka Shiinaha ee 2021! 1. Caymiska caafimaadku wuxuu galaa xilligii 2.0 Nooca 1.0 ee caymiska caafimaadka ayaa badiyaa ah caymiska caafimaadka guud ee ugu horreeya Shiinaha muddo 5,000 sano ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay Qalliinka caaga ah?
Ku Saabsan Qalliinka Balaastik Qalliinka balaastigga waa takhasus gaar ah oo hagaajiya, dib-u-dhis, iyo beddela jirka aadanaha. Waxaa loo qaybiyaa laba qaybood: Qalliinka dib-u-dhiska iyo Qalliinka Qurxinta. Qalliinka dib-u-dhiska waxaa ka mid ah qalliinka craniofacial, qalliinka gacanta, qalliinka yar-yar, iyo gubashada iyo nabarrada ...Akhri wax dheeraad ah »
Ku saabsan Macluumaadka Diiwaangelinta Qalabka Caafimaadka ee Shiinaha Laga soo bilaabo CMDE
Waqtiga boostada: 03-05-2021
Ku saabsan Macluumaadka Diiwaangelinta Qalabka Caafimaadka ee Shiinaha Laga soo xigtay Macluumaadka Shayga ee loo yaqaan 'CMDE Product information' ee gudaha ee heerka III ah, oo la soo dhoofiyay Qalabka II iyo qalabka caafimaadka ee Class III oo loo oggolaaday diiwaangelinta 2020 Sannadka 2020, Maamulka Cuntada iyo Dawada ee Gobolku wuxuu oggolaaday wadarta 1,572 alaabada qalabka caafimaadka. .Akhri wax dheeraad ah »
Kala soocida ugu weyn ee maqas qalliinka
Waqtiga boostada: 03-02-2021
Kala soocidda ugu weyn ee maqas qalliinka Badanaa maqasyada qalliinka waxaa loo leexan karaa qaybo badan iyadoo loo eegayo habab kala sooc kala duwan. Sida isticmaalka qaybaha jirka, waxaa ka mid ah maadada microsurgical, maqaska indhaha, maqasyada unugyada, maqasyada tolida, iyo wixii la mid ah. Gudaha ...Akhri wax dheeraad ah »
Fikradaha iyo rajooyinka ku saabsan Magaca Qalabka Caafimaadka
Waqtiga dhejinta: 02-26-2021
Caadi ahaan qalabka caafimaadka waxaa ka mid ah qalabka qalliinka iyo qalab, sida maqaska, qasabadaha, irbadaha haya, qabatooyin, iyo wixii la mid ah. Shiinaha, qalabka qalliinka waxaa had iyo jeer lagu qoraa qalabka caafimaadka ee Class I. Shaqada laxiriirta magacaabida magacyada alaabada qalabka caafimaadka waxay leedahay taariikh dheer. Tan iyo markii ...Akhri wax dheeraad ah »
Shirkada Dhakhaatiirta Qalliinka Lafaha ee Hongyu ayaa kaqeyb galay Shirka Hangzhou City
Waqtiga boostada: 10-26-2020
Shirka Hongyu ee Caafimaadka ayaa kaqeyb galay Shirka Dhakhaatiirta Lafaha ee lagu qabtay Magaalada Hangzhou 2020-10-26 Shirka qaliinka balaastigga ah ee muhiimka ah oo caan ah ayaa lagu qabtay magaalada Xihu, Hangzhou, Shiinaha, laga bilaabo 20th ~ 24th, 2020. Madaxweynaha HongMedical Mr.Chen iyo Maareeyaha ayaa kaqeybgalay kulanka iyadoo ay matalayeen shirkadayada ...Akhri wax dheeraad ah »
Coronavirus: waa maxay oo sideen iska ilaalin karaa naftayda?
Waqtiga dhejinta: 08-21-2020
Coronavirus: waa maxay oo sideen iska ilaalin karaa naftayda? Fayras cusub oo la yiraahdo xanuunka daran ee neefsashada ee daran coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ayaa loo aqoonsaday inuu yahay sababta cudurka ka dillaacay dalka Shiinaha ee ka bilaabmay 2019. Cudurka waxaa loo yaqaan coronavirus disease 2019 (COVID-19). Bishii Maarso 2020, Wo ...Akhri wax dheeraad ah »
Dib-u-habeynta caafimaadka waa tallaabo geesinimo leh
Waqtiga dhejinta: 12-19-2019
Siyaasadda deegaanka weyn ee caafimaadka ayaa ah mid cufan oo culus sanadkan, iibsiga tirada suunka cusub, hagaajinta diiwaanka caymiska caafimaadka iyo wadaxaajoodka, dhimista canshuuraha dhifka ah, dhiirrigelinta hiddo-wadaha iyo nidaamka macluumaadka caymiska caafimaadka oo mideysan, dib-u-habeynta ay sameysay farmashiyaha .. .Akhri wax dheeraad ah »
Bandhiga caafimaadka hongyu ee mustaqbalka
Mustaqbalka carwada caafimaadka hongyu, si loo sahamiyo shanta isbeddel caafimaad ee mustaqbalka On Janaayo 13, ee 21 CHTF bandhig caafimaad iyo caafimaad, oo ay soo qabanqaabiyeen bandhig abuurka 'Bowen', ayaa laga furay hoolka 2 ee xarunta bandhigga. Tani waa daaqad wanaagsan oo lagu fahmo caafimaadka Shiinaha warshadaha ...Akhri wax dheeraad ah »
Weydiimaha ku saabsan cusbooneysiinteenna, fadlan noo dhaaf e-maylkaaga waxaanan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
Qaybaha ugu waaweyn
KU DAR: 46 Dukangqiao Road, Chengdong, Huai 'Degmo, Huai' An City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha